Barnaamijyada digniinta roobka ugufiican | Saadaasha Shabakadda
Ogaanshaha goorta ay roob da'ayaan aad ayey muhiim ugu tahay dhammaan kuwa ay tahay in ay u guuraan ama hawlo ka fuliyaan waddada. Gaar ahaan xilliyada xasilooni-darrada jawiga halkaasoo roobku ku da'ayo daqiiqado yar gudahood, saadaalinta noocan roobka ah waxay naga caawin doontaa inaan si wanaagsan u bixino oo aan sii odoroso dhacdooyinka.
Si loo ogaado xaalada cimilada markasta, waxaa jira codsiyo wareega oo ah digniinta roobka oo noo sheegaya goorta roob da'ayo. Ma rabtaa inaad ogaato waxay yihiin barnaamijyadan iyo sida ay u shaqeeyaan?
1 Barnaamijyada moobiilka ee roobabka
1.1 Qaylo-dhaanta roobka
1.2 Cimilada Yahoo
1.4 Cimilo Duur
Barnaamijyada moobiilka ee roobabka
Maanta taleefannada casriga ahi waxay u shaqeeyaan sida kombuyuutarrada dhabta ah. Qalabka astaamahan, awood u leh inuu gantaal u diro dayaxa haddana waa la heli karaa qof walba. Sidaa darteed, waa aalad wax ku ool ah in loo dhaqmo sidii saadaasha hawada iyo in la saadaalin karo goorta roob da’o.
Hoos waxaa ku qoran barnaamijyada digniinta roobka ee ugu fiican iyo sida ay u shaqeeyaan.
Barnaamijkan ayaa ah nooc saadaasha hawada ah waxaana uu boos ka qaatay qiimeynta barnaamijyada saadaasha hawada ee ugu wanaagsan Android. Waxay nooga digeysaa dhawaq la mid ah kan roobku sameeyo kaasoo ah inaan ku jirno meel aad u dhow oo ay ka da'ayaan roob iyo baraf labadaba. Tani way suurtagal tahay mahadnaqa khariidad juqraafiyeed oo gacan ka geysaneysa helitaanka booskeenna iyadoo la adeegsanayo nidaamka GPS.
Barnaamijkan waxaad ku arki kartaa nooca roobka ee animation-ka ku soo dhowaanaya. Awooddeeda waxaa lagu garan karaa kala duwanaanta midabada. Barnaamijkan wuxuu adeegsadaa xogta ay bixiyaan adeegyada cimilada waqtiga dhabta ah si loo helo saxnaan weyn.
Waxay awood u leedahay inay ka digto nooc kasta oo roob ah, ha ahaato roob, baraf iyo roobdhagaxyaale. Waxaad noogu soo wargelin kartaa ogeysiin, gariir ama cod. Dhammaan xogta roobka waxaa lagu arki karaa khariidadda juqraafiyeed ee ay bixiso, iyada oo la ballaarin karo aagga la yiri si loo doorto barta xiisaha leh ee aan dooneyno inaan ogaano.
Waa muhiimad muhiim ah ku rakib barnaamijka Qariiradaha Google si uu si sax ah ugu shaqeeyo. Abku sidoo kale wuxuu keenaa widget-yo kala duwan si loo dhigo naqshado iyo cabbirro kala duwan si loo ogaado xaaladda marwalba la cusbooneysiiyo. Thanks to widget-yadaas waxaan awoodi doonnaa inaan ogaano xaalada cimilada adigoon si joogto ah u fureynin arjiga adeegsiga adeegsiga baytarigiisa
Codsigu waxtar badan buu u leeyahay dhammaan noocyada waxqabadyada bannaanka ah waxaadna barnaamij ka samayn kartaa jidka aad ku sii socon doonto ka hor. Waxay sidoo kale u adeegtaa isticmaalka maalin kasta ee maalinteenna maalin.
Waxay leedahay laba nooc, midka bilaashka ah iyo kan la bixiyay. Kan ugu horreeya ayaa keena xayeysiin. Ta labaad ma keento oo waliba waxay leedahay astaamo dheeri ah sida baaxadda ogaanshaha ee la dheereeyey.
Barnaamijkani wuxuu leeyahay naqshad aad u jilicsan. Aad ayey u badan tahay inay ku guuleysatay abaalmarin shirkadda Apple. Waxay na ogeysiineysaa waqti kasta xaalada cimilada waxayna leedahay sawirro goobta loogu talagalay oo laga soo qaaday barxadda Flickr.
Barnaamijkani wuxuu leeyahay nashqad yar oo aad u yar oo aad ku arki karto heerkulka isla marka aad furto. Marka la furo, haddii aan hoos u riixno fartaada, waxay noo sheegi doontaa heerkulka maalmaha soo socda, suurtagalnimada in roob ka da'o meelaha u dhow aaggeenna, xilliga ay waagu u baryo iyo makhribka, inta raajada UV, iwm. .
Si sax ah u shaqeyso, waa inaan heysanaa goobta GPS ee firfircoon.
Codsigani waa mid beddel ah, maaddaama ay na tusayso cimilada waqti kasta sawirada xayawaanka duurjoogta ah, waxay kuxirantahay waqtiga maalinta aan kulanno. Haddii tusaale ahaan ay tahay habeen iyo daruuro, waxay na tusaysaa deero cunaysa caws dhul bannaanka ka ah iyo xagga hoose daruuro qaarkood oo dul maraya.
Intaas waxaa sii dheer, waxay ina ogeysiineysaa xaaladda saadaasha hawada maalmaha soo socda, heerkulka iyo suurtagalnimada roobka iyo xawaaraha dabaysha.
Codsigan waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan Android iyo iOS. Waxay bixisaa macluumaad ku saabsan cimilada ilaa 15 maalmood ka hor. Waa inaad ogaataa in saxnaanta macluumaadkaan uu noqonayo mid aan la hubin marka seddex maalmood ay dhaafaan. Nidaamyada Hawada laguma saadaalin karo saxsanaanta badan waqtigan, maaddaama isbeddelo badan oo saadaasha hawada ay isbedbeddelayaan.
Markaan fureyno daaqada barnaamijka waxaan arki karnaa doorsoomayaasha sida qoyaanka, qorax soo baxa iyo waqtiga qorrax dhaca, muuqaalka, xawaaraha dabaysha iyo jihada, cadaadiska jawiga, heerkulka iyo qabowga dabaysha. Waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan ogaano doorsoomayaasha lagu xusay magaalooyinka kale iyadoo la adeegsanayo mashiinka raadinta. Sidaas ayaanu ku awoodi doonnaa inaanu ku ogaano waqti kasta duruufaha meesha aan u safreyno in naloo fidinayo dalladaha oo aan iska ilaalino inaynu qoyanno.
Codsiyadaas waxaan ku ogaan karnaa waqtiga ina sugaya waqti walba iyo meelaha aan dooneyno inaan aadno iyadoo la siinayo meel kasta oo aan aadno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Barnaamijyada digniinta roobka ugufiican